Afrikaan ISIS ka tirsan oo si waxashnimo ah u gowracay calooshiis u shaqeyste reer Afghanistan ah: SAWIRRO
Wiil Afrikaan ah oo ka tirsan ururka ISIS ayaa ku bireeyay garoonka ciidamada T4 ee magaalada Homs ee dalkaasi Suuriya askari calooshiis u shaqeyste Afghan ah kaas oo ay soo kireysatay dowladda Iran islamarkaana ka bar-bar dagaalamayay ciidamada dowladda Suuriya.
by calanka —	December 21, 2016 —	Sawirro
Tacsi taal magaalada Berlin iyo baabuurkii xamuulka ahaa ee dadka lagu xasuuqay oo wali bartiisii yaala: SAWIRRO
Caasimadda dalka Jarmalka ee Berlin ayaa waxaa xalay ka dhacay ka dhacay weerar argagixiso oo loo adeegsaday gaari xamuul ah kaas oo isagoo xowli ku socda galay suuq bannaanka ah oo laga dukaameysanayay. Waxaa ku dhintay 12 qof, 48 kalena waa ay ku dhaawacmeen.
by calanka —	December 20, 2016 —	Sawirro
Kala carar ka dhacay goobtii lagu toogtay safiirka Ruushka ee Turkiga iyo farriintii gacan-ku-dhiiglaha: VIDEO
Waxaa baraha bulshada la soo dhigay muuqaal muujinaya dilkii safiirka Ruushka ee dalka Turkiga kaas oo lagu toogtay goob lagu soo bandhigayay sawirro oo ku taal magaalada Ankara. Ruuxa dilka fuliyay ayaa farrin jeediyay dilka kaddib.
by calanka —	December 19, 2016 —	Video
Ciidamada Ciraaq oo wali foodda gelin la`magaalada Mosul iyo khasaaro xooggan oo kasoo gaaray: SAWIRRO
Ciidamada Ciraaq oo gacan ka helaya kuwa Kurdiyiinta iyo xulufada Mareykanka ayaa wali foodda si buuxda u gelin la magaalada Mosul oo xarun u ah kooxda ISIS. Weerarka magaaladan ayaa bilowday bartamihii bisha Oktobar ee sanadkan, waxa uuna iminka socda in ka bada labo bilood.
by calanka —	December 19, 2016 —	Sawirro
Tuugonimo casri ah oo ka bilaabatay Mareykaka: VIDEO
Booliska magaalada Davie ee gobolkaasi Florida ayaa baadi-goobaya dhallinyaro taleefannada gacanta ka xayuubsaday dukaan kaddib markii ay lasoo bexeen qaab tuuganimo cusub.
Qaabkee ayay u socotaa waddo-falista ka socota duleedka magaalada Jowhar?: VIDEO
Duleedka magaalada Jowhar waxaa ka socdo howlo wado falis oo ay wadaan ciidamada AMISOM kaas oo looga goleeyahay sidii ay u sahlanaan laheyd soo gelissa magaalada Jowhay oo ah xarunta gobolka Shabeelaha Dhexe.
by calanka —	December 18, 2016 —	Video
Maxaad kala socotaa “hal-haysyadii” loo adeegsaday doorashooyinkii soo maray Mareykanka: SAWIRRO
Doorashooyinkii kala duwanaa ee ka dhacay dalka Mareykanka ayaa soo maray marxalado kala duwan , waxaana loo adeegsaday “hal-haysyo” taariikhda galay kuwaas oo qaarkood dib boorka looga soo jafay sida “Make America Great Again” oo uu adeegsaday madaxweynihii ugu dambeeyay ee la doorto Donald Trump.
by calanka —	December 17, 2016 —	Sawirro
Daawo waxa ay diyaaraddan ku dhigto ninkan: VIDEO
Nin makaanik diyaaradeed ah ayaa dabeysha diyaaraddu qaaday kaddib markii iyada oo duuleysa uu hoosta ka galay. DHacdadan ayaa ka dhacday mid ka mid ah maraakiibta dagaalka Mareykanka dusheeda xilli hore.
by calanka —	December 17, 2016 —	Video
Obama oo dhakhtarkiisa gaarka ah dalbaday xilli uu ku gudo jiray shir jaraa`id
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama oo xalay mar uu shir jaraa`id ku gudo jiray waxa uu dalbaday dhakhtarkiisa gaarka ah kaddib markii mid ka mid ah wariyayaashii goobta ku sugnaa uu xannuun kusoo booday.
SUURIYA: Qaabka mucaaradka looga daadgureynayo magaalada Xalab: SAWIRRO
Kumannaan ka mid ah dagaalyannada mucaaradka iyo qoysaskooda ayaa la filayaa inay ka baxaan bariga magaalada xalab. Gawaari isugu jira basas iyo kuwa gurmadka degdegga ah oo ay horkaceyso hay’adda Bisha Cas ee Suuriya ayaa waxaa lagu qaaday dadka xanuunsan iyo kuwa dhaawac ah.
by calanka —	December 16, 2016 —	Sawirro